लोकतान्त्रिक शक्तिलाई किन वाइपास गर्दैछ भारत ? :: चित्र केसी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ आश्विन २०७७, सोमबार १८:५६ English
लोकतान्त्रिक शक्तिलाई किन वाइपास गर्दैछ भारत ? :: चित्र केसी
जब इन्डियामा अङ्ग्रेजहरुको शासन थियो, त्यो बेला नेपालमा राणाहरुको एकदलिय शासन ब्यवस्था कायम थियो । नेपालमा कुनै पार्टी खोल्ने हकअधिकार थिएन । सबै जनाताका हक अधिकार खोसिएको थियो । राणा शासनबिरुद्द आन्दोलन सुरु गरेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भारतबाट नेपालको आन्दोलन सफल पार्नको लागि योजना बनाउदै काम गरिराखेका थिय । प्रजातन्त्रका सेनानी बिपी कोइरालाबाट नेपालमा कुनै पनि हालतमा राणा शासन हटाएर जनाताको हक अधिकार स्थापित गराउनु थियो । एकातिर नेपालमा राणाहरुको बिगबिगी अर्को तिर भारतमा महात्मा गान्धिले अङ्ग्रेज बिरुद्द लिएको भारत छोड् आन्दोलन पनि सशक्त रुपमा अगाडि बढीराखेको थियो जुन आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला प्रत्यक्ष रुपमा आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो र सन १९४७ मा भारतीय जनाताको आन्दोलन र माहात्मा गान्धिको अथक आन्दोलनबाट भारतमा अङ्ग्रेजहरु भाग्न बाध्य भए जस अनुसार भारत स्वतन्त्र मुलुक बन्न गयो पनि । तर भारत आफुलाई जहिले पनि विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुक हुँ भनेर दाबी गरिरहन्छ तर उसले कहिले पनि प्रजातन्त्रको न्युनतम मुल्य र मान्यतालाई अबलम्बन गरेको देखिदैन त्यो पनि छेमिकी राष्ट्र नेपालको बारेमा । भारतले कहिले पनि नेपालको जनता र प्रजातन्त्रलाई सहयोग र दिगो बनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन । बरु नेपालमा राजनैतीक स्थिरता कायम गरेर आफ्नो स्वार्थ र अभिस्ट पुरा गर्ने बाहेक उसको नेपालको प्रजातन्त्र प्रति कहिले राम्रो र सकारात्मक सोच जान सकेन ।
नेपालको सिमा निर्धारण देखि लिएर दुई देस बिच भएका सन्धि सम्झौता जस्ता असल छिमेकी राष्ट्र बिच हुने सहमतिमा पनि उसले गर्ने गरेका कामकार्बाही बाट नेपाल ठगिएको छ । नेपालले पटक पटक बिगतमा भएका नेपाल बिरुद्दका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नु पर्दछ भनेर प्रस्ताब राख्दा पनि गम्भिर रुपमा लिदैन,हुनत यो बिषय नेपालको कुट्निती तर्फ भएको कम्जोरी पनि हो । भारतले नेपाललाई जहिले पनि असल मित्र र राष्ट्रको रुपमा हेर्दा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपाललाई लिएको छ । नेपालका प्रमुख राजनैतीक पार्टीहरुले पनि भारतको स्पस्ट बैदेसिक निती के हो भन्ने कुरामा अडान लिन नसक्दा पनि यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । नेपालका पार्टीहरु कसरी भारतलाई खुशी पारेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भनेर त्यही अनुरुप भारतको चाहना अनुसार काम गरिराखेको अवस्था छ । पछिल्लो चरणमा नेपालमा कसलाई सरकार बनाउने भन्ने खेलमा पनि भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पाइन्छ । भारत जस्तो आफुलाई प्रजातन्त्रको दुहाइ दिनेले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न प्रजातन्त्रको बिरोधी अधिनायकबादको निर्तेत्व गर्ने एमाओबादिलाई आफ्नो विश्वाश पात्र बनाएर नेपालको प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खेलमा अग्रसर छ जुन कुरा अती नै आस्चर्यजनक देखिन्छ ।
नेपालमा संघइयताको सबालमा पनि भारतिय चल्खेलले गर्दा संबिधानसभा नै बिघटन हुन पुग्यो । ए तराइलाई एक प्रदेस बनाएर नेपाललाई पनि सिक्किमीकरण गराउने सोचमा लागेको छ । पहाडलाई ११ टुक्रा बनाउने रे अनी तराइलाई १ मात्र प्रदेस बनाउनु पर्दछ भनेर कुरा उठाउनुको रहस्य के हो त ? यसरी एउटा छिमेकी राष्ट्रको कारणबाट अर्को छिमिके राष्ट्रको राजनैतीकमा असर पुराउने खेल हुन्छ भने निस्चित रुपमा त्यो राष्ट्र असल छेमिकी बन्न सक्दैन । पुष्पकमल दाहाल ब्यक्तिगत रुपमा चाइना भरमण गर्न जादा पनि तीनचोटि लुकीलुकी भारतीय राजदुत एक सामान्य कर्मचारिलाई भेटेर अनुमती लिएर जान्छन् भने नेपालको नेताहरुको हबिगत के छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
भारतले नेपालको प्रजातन्त्रप्रति लगातार संघर्स गर्दै आएको पार्टीलाई कहिले साथ दिन सकेन । उसले प्रजातन्त्र होइन जो आफु अनुकुल भनेको मान्छ त्यो शक्तिलाई उपयोग गर्दै आएको छ । अहिले सबै भन्दा भारतको विश्वासिलो सक्ती एमाओबादी बन्न पुगेको छ । माओबादी जतीसुकै राष्ट्रबाद राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको नक्कली कुरा गरे पनि वास्तवमा उसको नाटक मात्र हो । माओबादी आफु सत्तामा रहन र बस्न पाईन्छ भने भारतको अनुकुल जुनसुकै काम गर्न पनि तयार छ जुन कुरा त बाबुराम प्रधानमत्री हुँदा गरिसकेका पनि छन । अहिले सम्म नेपालको स्वाधिन्ता र स्वतन्त्रताको लागि भारत सँग आफ्नो निडर तरिकाले कुरा राख्ने नेता बिपी कोइराला हुनुहुन्थयो । त्यसपछि २०५१ सालमा पनि मनमोहन अधिकारिले १९५० को असमान सन्धिको बारेमा कुरा राख्नु भएको थियो । जुन कुराले माओवादी आन्दोलन भएको थियो ४० बुदा मध्य अधिकाम्स भारत बिरोधी बुदा थिए । सबैभन्दा चर्को र राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रबाद्का कुरा गरेर नथाक्ने पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामले आफु सरकारमा रहदा १ बुदा पनि भारतको बिपक्षमा उठाउन सकेनन । यसबाट थाहा हुन्छ कि एमाओबादिको राष्ट्रबाद र उसको अबसरबादी चरित्र ।
त्यसैले अब नेपाली जनताले स्पस्ट पहिचान गर्ने समय आएको छ वास्तवमा राष्ट्रबादी, प्रजातन्त्रबादी र जनाताको सार्बभौम सत्ताको रक्षा गर्ने पार्टी कुन हो भनेर । बिदेसिलाई खुशी पारेर आफ्नो स्वाभिमान बिक्री गराउने माओवादीको जस्तो नक्कली राष्ट्रबाद नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन ्रनेपाली जनता जहिले पनि स्वतन्त्रपुर्बक बाच्न चाहन्छन । नेपालको हरेक कुरमा स्थिरता कायम गराउने भारतीय निती बिरुद्द नेपाली जनता एक हुनु पर्दछ । भारतले अहिलेको अवस्थामा लोक्तान्त्रिक शक्तिहरुलाई बाइपास गरेर एक्दलिय अधिनायकबादको नेतृत्व गरेर अगाडि बढेको माओवादीलाई विश्वाश पात्रको रुपमा लिनु प्रजात्रन्त्रको लागि त दुर्भाग्य नै हो पछि स्वयम इन्डियाको लागि पनि माओवादी भालुको कन्चट र इन्डियाको राजनीतिमा पनि प्रतिकुल असर पुग्ने नै छ किनभने कम्युनिष्ट भनेका अबसरबाद्को प्रयोग गर्ने र सियो बाट पसेर फाली बनेर निस्कने जात हो । यो सम्बेदनशील बिषय बस्तु भएकोले आफुलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार ठान्ने इन्डियाले समयमा नै बिचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
१४ बैशाख २०७०, शनिबार १९:२७ मा प्रकाशित